Igumbi losapho eRoyal Hotel
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguRoyal Hotel
URoyal Hotel unezimvo eziyi-188 zezinye iindawo.
Ixinene kwimbali kwaye ibuyiselwe ngokwesiqhelo, iRoyal Hotel ingeyoluntu kwaye iyasebenza ingaphezulu nje kwendawo yentselo, yindawo! Siyathemba ukuba ungasijoyina kungekudala kwaye ujabulele yonke into iRoyal Hotel, iLwandle loLwandle olunokubonelela.
Yeyiphi indlela engcono yokufumana ihotele yethu yembali kunokuchitha ubusuku kumagumbi ethu ahlaziyiweyo. Igumbi lesi-6 ligumbi losapho elinebhedi yeKumkanikazi kunye neebhedi ezimbini zeKing Single.
Ukwenzela intuthuzelo yakho onke amagumbi afakelwe ifeni yesilingi kunye neeyunithi zokufudumeza / zokupholisa inkqubo.
Iibhedi zinelinen entsha kwaye zilungiswa yonke imihla.
Izibonelelo zethu ezihlaziyiweyo zokuhlambela zamadoda nabasetyhini zabelwana ngazo kodwa hey yongeza nje umtsalane wamava ehotele eyimbali.
Ifumaneka kumbindi wengingqi ye-wheatbelt yaseVictoria's Mallee, iLwandle loLwandle lusemnyangweni wezinto ezinomtsalane. Ichibi elihle laseTyrrell elinobuso obufana nesipili ngumfoti kunye ne-stargazers utopia!
Ndwendwela iPaki yoMmandla yeGreen Lake ukuze umise inkampu kunye nayo yonke imisebenzi yakho yokuzonwabisa esekwe emanzini.
Qala ukhenketho lobugcisa bendawo ngokundwendwela kwi-Sky Mirror Gallery okanye ukhenkethe imizobo eseludongeni ejikeleze indawo yesitalato esikhulu seLwandle lwaseLwandle.
Emva koko hamba iSilo Art Trail, igalari enkulu yangaphandle yaseOstreliya, uqala kanye apha eLwandle lweLwandle kunye nolona lutsha ludibanisa umzila.
Ichibi loLwandle alikho kude naphi na ke yenze isiseko sakho xa uhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Royal Hotel
Royal Hotel Sea Lake is more than just a pub!
Ukukunceda sivula iintsuku ezisi-7 ngeveki. Silapha ngenxa yakho.
URoyal Hotel yi-Superhost